Iyo ramangwana re iPhone skrini rinoenda kuburikidza neMicro-LED tekinoroji | IPhone nhau
Iko hakuna vashoma vashandisi, kutaura zvazviri ndingati ivo ndivo vazhinji, vanomirira nemaoko akazaruka zuva iro Apple painotanga iPhone ine OLED skrini. Rudzi urwu rwechidzitiro runopa irinani color gamut uye inoshandisa mashoma simba, kunyanya pane yakasviba mamiriro. Kana runyerekupe rwuri rwechokwadi, iyo iPhone ye2017 inoshandisa iyo OLED skrini, asi iyo modhi inozoishandisa uye vashoma vamwe nekuti Tim Cook nekambani vanotarisirwa kukwakuka kuenda ku Micro-LED inoratidzira nguva pfupi yapfuura.
Wang Jyh-chau, CEO wepaneli inogadzira Innolux, anotenda izvo skrini OLED haizoshandure zvachose LCD nekuda kwekuda kwayo zviwanikwa, zvinoita kunge zvinokanganisa mashandiro echishandiso. Sekureva kwaWang, iwo maMicro-LED ekuratidzira anozove echinyakare uye ichi chichava tekinoroji inoshandiswa mumidziyo yakawanda yekubata mune isiri kure kure ramangwana.
Micro-LED inoratidzira ichapa zvirinani kusiyana uye kupenya
Sezvo nechero ipi nyowani nyowani kana yekuvandudza tekinoroji, hapachina michina inoshandisa Micro-LED kuratidza nekuti yavo mitengo yekugadzira yakakwira nhasi. Zvinogona zvakare kunzi nerudzi urwu rwechidzitiro zvinoitika senge nemabhatiri aya anga achivimbisa kuzvimiririra kwemavhiki emakore uye asati asvika: kuve wekutanga kutora nhanho kunogona kufamba kune njodzi uye, kana kuri Apple anozvipa, zvingave zvinogoneka kuti isu taive ne x-Gedhi regore.
Nei Micro-LED inoratidza zvirinani pane maOLED?
Iwo masikirini akatetepa uye akareruka.
Ivo vanopa zvirinani ruvara gamut, kupenya uye resolution.
Vanoshandisa simba shoma uye zviwanikwa.
SaOLEDs, ivo zvakare vanochinja.
apuro akatenga LuxVue muna 2014, kambani ine chikonzero chekuve iri Micro-LED skrini. Kufunga nezve zvese zvakanaka zveaya ma skrini, mubvunzo ndewekuti vachatanga kuzvishandisa riini. Ini handidi kubheja pazviri, asi ivo vangashamise gore regumi regumi iPhone uye vova vekutanga kushandisa matsva macrini?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo ramangwana reiyo iPhone skrini inoenda kuburikidza neMicro-LED tekinoroji, iri nani pane maOLED